Ekwentị mkpanaaka 4G emechiri emechi, Mate40 Pro, 8.5mm Dual SIM Free Ultra Slim Smartphone, Ngosipụta 6.6 ″ HD, Ngosipụta kaadị 3, Igwefoto 8GB+256GB, 16MP+32MP
Ekwentị mkpanaaka 4G akpọchiri akpọchi, Mate40 Pro, 8.5mm Ultra Slim Dual SIM Free Smartphone ... 239,28 EUR 【Ultra Slim Featherweight Design】 Nnukwu ọkụ na kọmpat, dị naanị 155g na 8,5mm dị gịrịgịrị, nha nha ọla edo na-emepụta ọmarịcha ahụmịhe nke. ..
Zụrụ Pk1ftd Smartphones K-Touch i10, 2GB + 32GB, njirimara ID ihu, 3,46 inch MTK6739V / CWA Quad Core 1.5Ghz, netwọk: 4G, Dual SIM, Google Play Nkwado (Black) Mobiles na smartphones.
(*2*) K-Touch i10, 2GB+32GB, Face ID ID, 3.46 inch MTK6739V/CWA Quad Core 1.5Ghz, Network: 4G, Dual SIM, Google Play Support (Black) Ekwentị ndị ọzọ nwere ike ịmasị gị: SalesTOP. 1 Samsung Galaxy A52s 5G ama nwere 6,5-inch FHD+ Infinity-O ngosi, 6 GB ...
Zụrụ Samsung Galaxy J4 Core Dual SIM 16GB 1GB Ram SM-J410F/DS Blue
Samsung Galaxy J4 Core Dual SIM 16GB 1GB Ram SM-J410F/DS Blue Galaxy J4 239,67 EUR galaxy j4 Ekwentị kacha ọhụrụ: SalesTOP. 1 Samsung Galaxy M12 Smartphone nwere ihuenyo 6,5-inch Infinity-V TFT LCD, 4 GB nke RAM na 64 GB ... 168,98 EUR SalesTOP....
Zụrụ ekwentị S58 Pro (*10*) 5180mAh batrị Helio P22 16MP Igwefoto atọ 5.71 inch ihuenyo 6GB Ram 64GB ROM Android 10 Cell (Green)
Ekwentị mkpanaaka S58 Pro 5180mAh batrị Helio P22 16MP Igwefoto atọ 5.71 inch ihuenyo 6GB... CPU: Helio P22 - MT6762V Sistemu ọrụ: Android 10; Ebe nchekwa: 6 GB Ram + 64 GB ROM kaadị SIM: SIM kaadị nọrọ na njikere 239,75 EUR Processor: Helio P22...
Zụrụ Smartphone A90, 4G, LTE, Helio P60, Octa-Core, HDR (*11*) igwefoto 12MP, 4GB + 64GB, 4280mAh, Android 11 (gradient)
A90 Smartphone, 4G, LTE, Helio P60, Octa-Core, 12MP HDR Camera, 4GB+64GB, 4280mAh, Android 11... 2. Ejikọtara ya na 4GB+64GB, ọ na-agba ọsọ ọsọ ma na-agba ọsọ nke ọma; 5. Kwadoro site na 4280mAh lithium-ion polymer batrị, ogologo ndụ ọrụ. 239,76...
Zụrụ Iridium SIM Kaadị (6. Iridium Satellite ekwentị Global akwụgoro ụgwọ maka kaadị SIM maka Latin America nwere nkeji 200 (ụbọchị 180 ziri ezi))
Iridium SIM Kaadị (6. Iridium Satellite ekwentị Global akwụgoro SIM kaadị maka Latin America na... 241,00 EUR adịghị arụ ọrụ akwugo SIM kaadị maka niile Iridium satịlaịtị ekwentị gụnyere 9500, 9505, 9505A, 9555, 9575 Oke na Gaa! Njikere ịgbalite ndị. ..